Ngicela Ungitshele Kungani Ngimunca! | Martech Zone
Ngicela Ungitshele Kungani Ngimunca!
NgoLwesine, Juni 21, 2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Ngiyayithanda imigomo. Ngithanda kakhulu imigomo lapho ngizibekela yona. Ngasekupheleni konyaka odlule ngazibekela umgomo wokuthi ngangizokwephula umaki we-5,000 kwiTechnorati ngo-2007. Lokhu kwakungezelela kokunye eminye imigomo engangizibekele yona. Ngaphandle kwempilo yami (ngidinga ngempela ukunciphisa isisindo), ngibhidlize yonke imigomo engizibekele yona, ngaphezu kweRandi lami leTechnorati.
Lawa masonto ambalwa edlule, ibhulogi yami ibonakala ngathi 'ibambekile' ekukhuleni, noma kunjalo. Ngingakubhala lokhu njengabantu abakhukhuleka ehlobo. Uma kungukuthi 'isikhundla' sakho asihambi, noma kunjalo, lokho kukhomba kwenye inkinga ngoba sonke kufanele sibekezelele ama-blahs asehlobo. Emasontweni ambalwa edlule, ngangijabule ukubona ibhulogi yami ilenga cishe ku-2,010… manje seyibuyele emuva ku-2,125.
Ingabe okuqukethwe kwami ​​kusale?
Ngimane ngincela nje?
Ngihambile ngaze ngathenga amanye ama-Adwords esayithi. Ngigxile kubhulogi ezinkampani nakwimithombo yezokuxhumana, nasekuthengeni indawo nge-Adwords e-Indianapolis. Ngithole ukuvela okungaba ngu-15,000 kuzikhangiso kepha ngokuchofoza okumbalwa kuphela. Angikukhathalele lokho, kakhulu, ngoba ukuchofoza kubiza imali. Umgomo wokukhangisa empeleni ukuqashelwa kwegama, hhayi ithrafikhi ebonakalayo. Ngibona ukuthi ngingalithola igama lami laphaya ezilalelini ezifanele, ithrafikhi izolandela. Ngazise uma ubona esinye salezi zikhangiso bese ungitshela ukuthi ucabangani ngaso.
Ngingathanda futhi ukuzwa ukuthi yini oyikhumbulayo ngebhulogi lami ebeliphawuleka ngaphambili kepha ebingakabi muva nje. Uma unamahloni futhi ungafuni ukuphawula esidlangalaleni, zizwe ukhululekile ukukusebenzisa ikhasi lami lokuxhumana. 'Udumo nengcebo yami' kubonakala ngathi kuza ikakhulukazi kuma-plugins wami we-WordPress, hhayi okunye okuqukethwe kusayithi. Kuyaphazamisa lokho ngoba ngenza ucwaningo oluncane ngezihloko zami usuku ngalunye.
Vele, uma ungathanda ukusiza ngempela ngokuqukethwe kwami ​​KANYE nesikhundla sami seTechnorati, bhala ngebhulogi lami nokuthi limunca kanjani kubhulogi yakho. Ngiyathembisa ukuthi ngivulekele ukugxekwa futhi ngilangazelela ukwenza ushintsho oluthile ngokushesha okukhulu.
Jun 21, 2007 ku-10: 41 PM
Ngakho-ke, uDoug, uma usufanele ukuthi ube se-top 5 yeTechnorati, yini elandelayo, ukubusa komhlaba? 🙂
Futhi bengicabanga ukuthi ama-10,000 aphezulu azoba umgomo omuhle 🙁
UJun 22, 2007 ngo-6: 41 AM
Okuphezulu okungu-5 nakanjani kungalwenza usuku lwami! Okuphezulu okungu-10,000 XNUMX kuyinto okufanele siziqhenye ngayo. Ngeqiniso anginaki kakhulu inombolo yangempela - ukuthi nje iyathuthuka. Muva nje bekulokhu kubuyela emuva ngakho ngikhathazekile.
Sobabili sizoqhubeka nokuxhuma! Akungabazeki ukuthi uzongidlula maduzane!
engtech @ internet tape imbobo
Jun 21, 2007 ku-10: 21 PM
Kungenzeka ukuthi ushaye isithiyo sezinyanga eziyisithupha.
ITechnorati ibala kuphela izixhumanisi ezinyangeni eziyisithupha ezedlule, ngakho-ke lokho kusho ukuthi ukuze isikhundla sakho siqhubeke sikhula udinga njalo ukweqa noma yiliphi izinga lezixhumanisi obuzithola ezinyangeni eziyisithupha ezedlule.
Ngithole ukuthi izinto zihambe kancane phakathi kuka-1900-2100… kwase kuthi ngo-1450-1900 kwahamba ngokushesha okukhulu.
Ngabe sengigula ngakho konke 🙂
UJun 22, 2007 ngo-6: 46 AM
Ngicabanga ukuthi uqinisile Eng! Ngizoqhubeka. Izibalo zami zizonke (kufaka phakathi ama-hits) ziyisicaba esincane futhi. Ngifunde kumasayithi afana I-Problogger ukuthi ukumane ungeze okuthunyelwe okuningi kungenza umehluko.
Ngingazonda ukubhala nje iposi ngenxa yeposi, noma kunjalo. Ngiyazi ukuthi akakweluleki lokho, kepha yilokho okungaba yikho. Ngithanda ukucabanga ukuthi ngifaka inani abantu abangalitholi kwenye indawo. Ngihlale ngifuna okwehlukile… okuthile okunzima ukukuthola!
Jun 25, 2007 ku-4: 58 PM
Kuzwakala sengathi uneblues yesikhathi sasehlobo!
Ngiyavuma ukuthi ukugcinwa kwezinyanga eziyi-6 kukaTechnorati kungenzeka kube yimbangela.
UJun 22, 2007 ngo-2: 30 AM
Ngicabanga ukuthi unikeza ukuxuba okuhle kokuthunyelwe futhi wenze kahle kakhulu ukudlula izinhloso ozibekile. Ngangiqhubeka ngixhume.
Ama-blogs amaningi ashaya ama-patches lapho kungekho msebenzi omningi. Ngiyakwazi lokho kubhulogi yami. Izinombolo zami zababhalisile ziphindwe kabili ezinyangeni eziyisi-6 ezidlule, kepha muva nje ithrafikhi ihlale ingaguquki, futhi isikhundla sami seTechnorati sinamathele kuzinga le-100K. Kepha akuqedi intshiseko yami yokubhuloga.
Ngikuthanda kakhulu ukushicilela nokubhala izindatshana futhi ngizoqhubeka nokuxhuma. Ngizama ukungagxili kakhulu ezibalweni zami kulezi zinsuku kepha kuhle ukusetha izinhloso njengoba wenze.
Ngibonile amanye ama-blogger enempumelelo emangalisayo ezinyangeni ezimbalwa zokwethulwa kwebhulogi futhi lokho kuhle ukukubona, kepha kuningi lethu, kuthatha umzamo omkhulu eminyakeni eminingana ukubona noma yikuphi ukubuya kwangempela.
Iseluleko sami kungaba ukuqhubeka nokubhala ibhulogi. Uma ukujabulela ukukwenza lokho ungayeki.
UJun 22, 2007 ngo-6: 43 AM
Ngiyakuthanda ukubhuloga, Itch! Alikho ithuba lokuthi ngizoyeka noma kunini kungekudala. Ngifuna nje ukuqiniseka ukuthi ngisabelana ngolwazi oluthile olubalulekile nani bantu!
UJun 22, 2007 ngo-7: 09 AM
Awuncele! Ngibonile ukuthi ithrafikhi, izixhumanisi ezingenayo, nababhalisile abasha baya ngamagagasi. Ukhiqiza okuqukethwe okubalulekile okuzoqhubeka nokuthola ukunakwa. Ngibheja emasontweni amathathu uzozibuza ukuthi kungani ubhale lokhu okuthunyelwe!
UJun 22, 2007 ngo-8: 18 AM
Ngiyabonga, Pat! Ngicabanga ukuthi ngangizizwa ngingaphephile kancane. Nina bantu niphenduka iqembu elikhulu lokusekela!
Futhi, ngiqaphele ukuthi ngifikile ku- # 41 kumaTlogd's's Power 150 Blogs. Hewu! Ngigxume kancane lapho!
Jun 22, 2007 ku-2: 13 PM
Ukukhala kwami ​​kungahle kube ngaphambi kwesikhathi! Ngibhekile futhi i-API ibuyisa inani elihlukile lesikhundla sami kunalesi siza sewebhu! Kubonakala sengathi ngaphula ama-2,000 XNUMX! Ngishiye abantu abahle eTechnorati ukubazisa ukuthi kukhona okungahambi kahle.
Jun 22, 2007 ku-6: 21 PM
Sawubona Doug, futhi yebo ngisaphila. Angibeki isisindo esikhulu kwizibalo ezibandlululayo njengeTechnorati ethanda ukukhonza. Izibalo zabo zenziwa kalula futhi azisho lukhulu emhlabeni wangempela. Ngingagxila ezibalweni zakho zangempela nganoma iyiphi ikhawunta oyisebenzisayo. Qhubeka ubhale okuqukethwe okuhle njalo futhi i-ROI izongena.
Ukuqaphela okukodwa. Ngiyabona ukuthi ufuna ithrafikhi yezinkampani, kepha ungahle uthande ukucabanga ngokukhanyisa isithombe sakho kancane. Uzobona ukuthi abakwaSeth Godin's, Steve Rubels (kanye neBloke Blokes 🙂 benza konke okusemandleni ukwethula isithombe esingelula. Kodwa-ke futhi, sebekhulile kancane futhi sebevele bafinyelele ezingeni elithile emhlabeni wobumbano. Ngakho yikholi yokwahlulela nokuthile ongacabanga ukukuzama.
Njengoba kusho u-Itch, abanye bakhuphukela phezulu ngokushesha. Kepha iningi labo ngosomathuba abakwazile ukwenza umdlalo ngohlelo, noma baxhunyaniswa ne-a-lister ebasizile endleleni. Kepha thina sonke esikwenzayo ngokuthembeka kuthatha isikhathi esiningi nomzamo omkhulu.
Qhubeka uqhubeke mfowethu.
Jun 25, 2007 ku-5: 33 PM
Ngiyabonga, Bloke! Leso iseluleko esihle! Nginezinketho ezimbalwa kakhulu ezinhle, kepha nakanjani ngizobheka ukuthola isithombe esincane kakhulu!
Ngijabule kakhulu ukuthi wenza kahle!
Jun 26, 2007 ku-5: 58 PM
Futhi khumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi amabhulogi amasha ayengezwa ohlwini. Yize noma isilinganiso sakho esiphelele singahle sehle kancane, ngenombolo ephelele usengu-x% ophezulu
Futhi-ke kufanele ucabangele ukuthi izithameli zakho ezibhekiswe kuwe zingobani. Ibhulogi equkethe okuqukethwe okungakhethi kangako ngokwemvelo izoba nethuba elingcono lokuthola izethameli eziningi. Ngamanye amagama, kubalwa ngempela ukuthi isilinganiso sakho simi kuphi uma kuqhathaniswa namanye amabhulogi namasayithi mayelana nokumaketha nobuchwepheshe.
Njengendawo yokugcina yokugcina, ungahlala usebenzisa izihloko zezindaba eziqukethe izinkomba ezithweni zomzimba zabesifazane;)
Qhubeka nomsebenzi omuhle futhi ugcine ukumamatheka.